I-FAQs- iShang Hai Tongke Flow Technology Co, Ltd.
1.Yintoni iziko lokuhambisa？
Ngokwokunikezelwa kwesicelo somthengi kwizibuko elimiselweyo, ukuba akukho sicelo sikhethekileyo, izibuko lokulayisha lizibuko laseShanghai.
2. Liliphi ixesha lokuhlawula？
30% wekhadi yi T / T, 70% T / T phambi ngolwandle, okanye L / C ngetyala kwi emehlweni.
3. Uthini umhla wokusiwa kweencwadi?
Ukuhanjiswa kweentsuku ezingama-30- 60 ukusuka kumzi-mveliso emva kokufumana idipozithi ngohlobo lweempompo kunye nezinto ezincedisayo.
4. Lide kangakanani ixesha lewaranti?
Kwiinyanga ezili-18 emva kokuba imveliso ihanjisiwe ivela kumzi-mveliso okanye iinyanga ezili-12 emva kokuqala kokusebenzisa izixhobo.
5. Nokuba ngaba ukubonelela ngolondolozo lwasemva kwentengiso?
Sineenjineli zobungcali ezibonelela ngesikhokelo sokufakwa kunye neenkonzo zokugcina ulondolozo lwasemva kokuthengisa.
6. Nokuba ngaba kufuneka unike uvavanyo lweemveliso?
Sinokubonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zovavanyo kunye neemvavanyo zomntu wesithathu ngokweemfuno zabathengi.
7. Ngaba imveliso inokwenziwa?
Sinako ngokusesikweni iimveliso ngokweemfuno zabathengi '.
8. Ngaba unika iisampulu?
Njengoko iimveliso zethu ziyimveliso eyenziwe ngomatshini, ngokubanzi asiboneleli ngeesampuli.
9. Yeyiphi imigangatho yeempompo zomlilo?
Iimpompo zomlilo ngokwemigangatho yeNFPA20.
10. Ngowuphi umgangatho odibana nawo nempompo yakho yemichiza?
Ngokwe-ANSI / API610.
11. Ngaba ungumzi-mveliso okanye inkampani yorhwebo?
Singumenzi, sinemveliso yethu, sidlulisile inkqubo ye-ISO eqinisekisiweyo.
12. Zeziphi izinto ezifakiweyo ezinokuthi zisetyenziselwe iimveliso zakho?
Sinokunikela ngeentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zokwenza isicelo sokudluliselwa kwamanzi, inkqubo yokuFudumeza nokupholisa, inkqubo yeShishini, ishishini leekhemikhali lePetroleum, inkqubo yoKwakha, unyango lwamanzi oLwandle, inkonzo yezoLimo, inkqubo yokulwa noMlilo, unyango lwelindle.
13. Loluphi ulwazi olusisiseko ekufuneka lubonelelwe kuphando ngokubanzi?
Amandla, iNtloko, ulwazi oluphakathi, iimfuno zeMathiriyeli, iMoto okanye iDiesel eqhutywa, Ukuhamba rhoqo kwemoto. Ukuba impompo yeinjini ethe nkqo, kufuneka sazi ubude besiseko esingaphantsi kunye nokukhutshelwa kuphantsi kwesiseko okanye ngaphezulu kwesiseko, ukuba ngaba yimpompo yokuziqinisa, kufuneka siyazi ukutsala kweNtloko.
14. Ngaba unokucebisa ukuba yeyiphi imveliso yakho efanelekileyo ukuba siyisebenzise?
Sinabasebenzi bobuchwephesha bobuchwephesha, ngokolwazi olunikezelayo, kudityaniswa nemeko eyiyo, ukuba ucebise ngezona zilungileyo kwiimveliso zakho.
15. Zeziphi iintlobo zeempompo onazo?
16. Leliphi ixwebhu onokuthi ulinike ixabiso lesicatshulwa?
Ngokubanzi sinikeza uluhlu locaphulo, igophe kunye nephepha ledatha, ukuzoba, kunye namanye amaxwebhu ovavanyo awadingayo. Ukuba ufuna ukuvavanywa kwamangqina angamashumi amathathu kuya kulunga, kodwa kuya kufuneka uhlawule intlawulo yeqela elingamashumi amathathu.